Paul Pogba oo Adnan Januzaj ku qal qaalinaya inuu kusoo laabto Man United – Xariir Noocee ah ayay leeyihiin? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Paul Pogba oo Adnan Januzaj ku qal qaalinaya inuu kusoo laabto Man United – Xariir Noocee ah ayay leeyihiin?
Paul Pogba oo Adnan Januzaj ku qal qaalinaya inuu kusoo laabto Man United – Xariir Noocee ah ayay leeyihiin?	Adnan Januzaj ayaa shaaca ka qaaday in Paul Pogba uu doonayo iney iskala shaqeeyaatn Old Trafford inkastoo uu haatan amaah uga maqan yahay.
Mustaqbalka 21-jirkaan ayaa la hudin waxaana suura gal ah inuu ka tago kooxda uu amaahda ku joogo ee Sunderland iyadoo lala xariirinayo horyaalka france
Januzajal oo la hadlay wargeyska The Sun ayaa yiri : “Paul waa ciyaaryahan cajiib ah, waxaana uu sameeyay farqi walba si uu uguuleysto wallina waa ciyaaryahan weyn”.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Saaxuub wanaagsan ayuu ii yahay gudaha United, had iyo jeer waan wada joognaa, waxaan wada aadi jirnay qado si wada jir ah waxaan wada ciyaari jirnay PlayStation. waxaana uu ii ahaa walaal”
“Dabcan, Paul waxaa uu iweydiiyay hadii aan kusoo laabanayo Manchester United. waxaa uu doonayaa inaan isaga la ciyaro, laakiin haatan waxaan joogaa Sunderland, waana inaan sameeyaa waxa ay kooxdan ubaahan tahay”.
“Waxaa jira go’aano naga sareeya, waxan ahay ciyaaryahan kubada cagta ah waana inaan shaqadaan xirfadeyda ah kusii jiraa.
Januzaj ayaa sheegay inuu doonayo in tababare Jose uu ku qanciyto inuu uqalmo booskiisa Red Devils halkii uu meelo kale aadi lahaa.
“Hadafkeyga waa inaan had iyo jeer uciyaaro kooxda Manchester United, laakiin waa inaad had iyo jeer dhago furnaataa, kumana ciyaari kartid mustaqbalkaada iyaodo heshiiska aan haysto ay tahay ilaa 2018”.
Mar uu ka hadlayay kooxaha doonaya ayuu yiri “waxaa jira kooxo badan oo ixiiseynaya laakiin aniga wax walba ayay wax walba igu xiran yihiin waxa dhimana wey imaan doonaan.”
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/paul-pogba-oo-adnan-januzaj-ku-qal-qaalinaya-inuu-kusoo-laabto-man-united-xariir-noocee-ah-ayay-leeyihiin/">Paul Pogba oo Adnan Januzaj ku qal qaalinaya inuu kusoo laabto Man United – Xariir Noocee ah ayay leeyihiin?</a>